CANAB KARMAKOD: SHARAXAADA KALA DUWAN, XULASHADA IYO BEERITAANKA, DHALID IYO SAWIR - BEERTA
Jadwal kala duwan oo leh barkad - canab "Karmakod"
Kareemaha kala duwan ee Karmakodku waa noocyada ugu badan ee aan qabin. sii kordhaya. Waxaa lagu kala gartaa iska caabinta cudurada, muddada ilaalinta miraha ee rucubada, iyo awoodda si ay u bogsadaan.
Waxaan jecel nahay labada growers iyo beerta xirfad leh.
Canab Karmakod waxaa loola jeedaa noocyada miiska. Noocaan waxaa ka mid ah Corinka Russkaya iyo Alexander. Goolasha khibrad leh waxay ku qiimeeyeen beeraha cusub ee Karmakod inay noqdaan 8.2 dhibcood 10 ka mid ah. Ma qallajin doono, laakiin waxay ku dhacdaa qorraxda adag.
Hagaajinta sabiibta tayadoodu sarayso, oo aan ka yareyn noocyada sabiibta caanka ah Century Kishmish iyo Raisin. Waxay leedahay gaadiid aad u sarreeya. Thanks to this, canab ah Karmakod waxaa loo qaadi karaa fogaanta dheer ee iibinta suuqyada iyo macaamiisha.
In muuqaalka, noocyada kala duwan waxaa loo barbar dhigaa Codrianca, taas oo aad uga xun Karmakod ee sifooyinka dhadhanka.
Qeexida noocyo canab ah Karmakod
Xilliga dayrta, xawaashka kala duwan ee Karmakadu wuxuu u baahan yahay manjooyin. Ma leh waqti dheer oo isdaba-joog ah oo xiiso leh dayrta dayrta ee geedka canabka ah. Awoodda koritaanka ee baadiyaha waa dhexdhexaad. Hawlgallada ubaxa waa oboepoly, iyo sidoo kale Amirkhan iyo Amethyst Novocherkassky, leh pollination wanaagsan.
Marka ay dhaafsiisan tahay waxay u baahan tahay caadi. Kala duwan ayaa leh korriin cajiib ah oo geedka canabka ah si ay u dhererka ugu wanaagsan ee caleemaha. Inta badan, dhererka geedka canabka ah waa 5 mitir. Burburka indhaha ku yaala duurka ayaa sababa 30-35. Geedka canabkuna wuxuu u eg yahay 8-10 indhood.
Caleemaha miraha wax ka badan 80%. Kooxaha si ay uga baxsadaan 1.5 illaa 1.8. Miisaanka isku dhejinta min 300 illaa 500 garaam.
Kooxo waaweyn ayaa gaari kara 800 garaam. Cufan dhexdhexaad ah. Qaabka qaabka cylindroconical, srednerlyhlye.
Miraha waxay leeyihiin muuqaal qurxoon oo qurux badan, quruxda maaha mid ka hooseysa Tayfiga iyo Chocolate kala duwan.
Miraha waa muddo dheer, oval-qaabeeya leh caarada fiiqan, 19x27 millimitir. Miisaanku wuxuu gaari karaa 8-11 garaam.
Miraha midabkiisu casaan-guduud. Marka si buuxda u qumman, mugdi madow waxay u egtahay midabka Kishmish Jupiter ama Ataman Pavlyuk. Dhadhanka waa cad, ubax. Mararka qaarkood qandaraasyo qandho ah oo ari ah ayaa la arkaa. Baraf leh casiir badan, fareeshka.
Maqaarka berry waa dhuuban yahay, ma xajin marka cuntada la cunayo. Qulqulka 9 g / l. Miraha waxay lumiyaan acid ka hor inta aan la saarin. Qodobbo sonkor ah 16%. Iyada oo Bisaylkiisa buuxa ee miraha, content sonkortu wuxuu noqonayaa mid ka badan - 22%. Si la mid ah macaan waa Angelica iyo Kesha.
Canab Sawir ah "Karmakod":
Xulashada iyo beeritaanka
Kareemaha kala duwan ee loo yaqaan 'Karmakod' waa nooca xulafada ah. Waalidiinta Waalidiinta Wanaagsan ee xuubka x. Machadka Macaanka ee Wine iyo Viticulture ee Russia VNIIVIV iyaga. Ya.I. Potapenko, Geedaha ururkan ayaa had iyo jeer loo kala soocay tayo sare leh, sarreysa iyo dulqaadasho cudurro kala duwan.. Iskuduwaha 'cardinal' ee kala duwanaanta noocaas ah waa Machadka Cilmi-baarista ee Ruushka ee KarMaCode.
Machadka, oo ahayd meesha Karmakod loo doortay, waxa uu ku hoos jiray liiska erayada VI-10-2-1. Waxaa lagu qaybiyey koonfurta Ruushka - Krasnodar Territory, Voronezh iyo Rostov; ee Ukraine, koonfurta Belarus, Moldova, Kazakhstan.
Kala duwanaanshuhu wuxuu ku ballanqaadayaa beerista dacha ama gareysan, oo ay wehliyaan Aleshenkin's gift or Augustine. Wixii noocyo kala duwan Karmakod ma u baahan tahay nidaam caadi ah oo soo degaya, iyo waraabe. Kala duwan oo leh gooyn xidid wanaagsan, xitaa marka beeray jiilaalka.
Kala duwan ayaa ka jawaabta kiniinka kor u kaca ee Bacriminta dabiiciga ah iyo macdanta. Fruiting wuxuu bilaabmaa sanadka saddexaad ka dib markaad degto. Geedo gaar ah oo dhirta ku koraya 180 centimeters, oo la xoqay - by 200 sentimitir. Laguma talinayo in la beero geedo karmakod ee hooska.
Iyadoo la'aanta iftiinka qorraxda, midhaha ayaa aan la garan karin, oo leh talooyin casaan-cagaaran. Si xun u dhicin on geed canab ah hoose. On canabki sare sare leh iftiin qorraxda, Bisaylkiisa waa dhakhso.
Kala duwan ayaa leh dhalid deggan.. Haysashada noocyo tufaax ah oo aad u hore leh leh dhalid sare. Goosashada mug-celinta oo kale ah waxaa muujinaya Ataman iyo Anyuta. Wuxuu ubaahan yahay bisayl buuxda 110-125 maalmood. Koonfurta, bisha Agoosto 10, ka weyn.
On canabkiin dheer ilaaliyo. Isla mar ahaantaana, ma lumiso dhadhanka, waxay ku guuleysataa sonkorta waxayna noqotaa mid macaan leh oo leh caraf udgoon ee xawaashka. Rut, Pleven Muscat iyo Friendship ayaa sidoo kale ku faani kara dhadhanka musqusha.
Cadaadiska barafka ee hooseeya - hoos udhaca illaa 22 digrii Celsius Tan iyo noocyada kala duwan ee koonfurta, ma u baahan tahay hoyga for jiilaalka.
Karmakod kala duwan ayaa iska caabisa cudurada: oidiyoon, xummad leh 3.5 dhibcood. Si aad u leexdo kallana - 3 dhibcood.
Daaweyn dheeraad ah ee ka hortagga cudurrada looma baahna. Laakiin ka dib markii ubax, waxaad ku ridi kartaa xal Abiga-Pick. Si aan u fahanno xaaladda, waxaan kugula talinaynaa in aad barato cudurrada noocaan oo kale ah iyo tallaabooyinka looga hortago, sida koloriin, anthracnose, iyo bakteeriyo. Aan la cunin xuun. Waxay u adkaysatay in la jiido geeddi-socodka. Iyadoo lagu salaynayo digir yar.
Qaar ka mid ah ilaha xogta ayaa tilmaamaya dillaac canab ah ka dib markii ay roobab culus. Laakiin beeralayda xirfadleyda ah macluumaadkan lama xaqiijin. Iyada oo la waraabiyo waraabin deg deg ah maalin kasta oo kale, wax miro ah ma lagu arkay.
Canab Karmakod wuxuu u adkeysanayaa dhammaan tilmaamayaasha beerashada, iska caabinta cudurada, xaaladaha cimilada. Waxay si fiican u koraan gobollada koonfureed ee Russia, gaar ahaan meelaha qorraxda. Miraha waxaa loo isticmaalaa si loo sameeyo sabiib tayo leh.
Waxaa si weyn loo isticmaalaa warshadaha cuntada, ee soo saaridda wax soo saarka cuntada, jellies, jams. Kareemaha kala duwan ee Karmakodku waa wax aan lagama maarmaan u ah cunnooyinka nafaqada leh iyo kuwa casiir leh. Goolasha khibrad leh waxay ku qiimeeyeen beeraha cusub ee Karmakod 8.2 dhibcood 10kii.